MA-ART-LAZA, VAHININ'NY PÔETAWEBS
Poeta sady mpikabary indray no vahinin'ny Pôetawebs. Lehilahy tanora izy. I Léa Fandresena sy i Anyah no miara-tapatapakahitra aminy.
Faly miarahaba anao izahay tongasoa eto amin'ny seraseran'ny Pôetawebs hiara-hitapatapakahitra aminay.
Mahazoa toerana andriamatoa fa ho manga tokoa ny resaka anio.
Faly miarahaba an'i Léa Fandresena sy Anyah ary ny mpanaraka rehetra ny Pôetawebs ihany koa ny tenako e!
Ny anarana hono fisandratana koa ampahafantaro ny mpisera ary ny momba anao.
Mialihirantsoa Maholiharilaza no anarana nampisaloran'ireo Ray aman-dReniko ahy. Avy amin'io fanampinanarako io ihany no notsoahina ny anarana nisalarona amin'ny fanoratana dia ny hoe M-art-Laza.
Samy nomen'Andriamanitra talenta daholo ny olona, inona amin'ireny no anjaranao?
Asa na talenta fa mikabary ny tenako ary manoratra tononkalo ihany koa, ny sombin-tantara kosa anefa mbola tsy nataoko nefa asa? Arakaraky ny aingam-panahy ihany io!
Mpikabary? Ahoana no fahitanao ny kabary ankehitriny, manaraka ny fomba taloha ve sa nisy fiovana?
Miroborobo tokoa izy io ankehitriny, liana aminy na ankizy na antitra na tanora. Io indray arakaraky ny firosoan'ny tsirairay sy ny safidy no misarika azy na hanaraka ny toetr'andro na hanaraka ny fomba taloha, na izany aza tokony tsy ho very kosa ny soatoavina ao anatiny.
Inona izao no tena nahasarika anao hikabary, dia ahoana ny fomba fanentanana ny olona ho liana aminy satria maro ny tanora mirona be amin'ny fandrosoana?
Araka ny voalazako tetsy ambony, na maro aza ny fandrosoana, misy ihany koa ny mandala sy liana hatrany.
Hidirako indray ary ny maha-poeta anao. Oviana ianao no nanomboka nanoratra?
Tamin'ny taona 94 aho no nanomboka nanoratsoratra sy nitia tononkalo; nisy fotoana lavalava mihitsy anefa tena nangina ary nanomboka tamin'ny taona 2014 vao niverina indray ary tsy hijanona intsony!
Misy zavatra mampiavaka anao ve amin'ny mpanoratra hafa?
Aleo angamba ny mpankafy no hamaritra an'izay fa tsy tsara loatra ilay misora-tena!
Fa tokony ho hita sy faritanao ihany ny zavatra mampiavaka anao ao anatin'ny mpanoratra maro be.
Tsy hiteny aho hoe manavanana ahy ny tononkalo malala-tsaina na somary masira fa amin'izay no mifoha kokoa ny aingampanahiko e! Tsy midika akory hoe ratsy saina na vetaveta fa manao tononkalo hafa tsy ampoizina ihany koa ny tenako!
Izay ilay tianay ho fantarina satria ny olona tsirairay dia tokony hanana ny mampiavaka azy, indrindra fa ianareo mpanakanto.
Mba omeo andinin-tononkalo iray na roa àry hamantarana anao e!
Tena tsy àry tadidiko tsianjery r'ise fa raha mety dia sombiny ihany ity a!
Tsy hadinoko ireny
Lanin'ny alika aho anie tamin'iny
F'izaho tsy niteny
'Lay izaho tratra hariva nanatona anao
Tsy hadinoko ireny.
Ny bedibedy sy ny ompa reny nataon-jokinao!
Tsy hadinoko ireny fa izaho tsy niteny satria tiako ianao...
Tena mafilotra tokoa. Izany koa nolazaina fa tsy tadidy!
Indray zoma aho tsy tafody an-trano nidiran'angano
Fa mbola voasazin'i mamanareo hikoso-trano...
Hahaha! Sady mampihomehy no mahafinaritra. Fa hono ho'aho, efa nisy boky ve iny tononkalo iny?
Tsy mbola namoaka boky ny tenako fa aleo aloha miandry ho matoy tsara.
Marina loatra izany. Ilaina ny fanaketrehana tsara ny sakafo vao aroso vahoaka.
Azonareo jerena ao amin'ny pejy "tononkalo malaza" na "tononkaloko" ny asa-soratro jiaby fa tsy feno ilay teo iny e!
Fa hono tokoa ho'aho ry Malaza, ianao mpanoratra, rehefa fotoana inona no manainga anao ny fanahy hanoratra? Tsy indraindray mantsy ny zava-misy no manery azy hanoratra.
Arakaraka ny zava-mitranga sy aingam-panahy tokoa fa tsy araky ny eritreritry ny olona sasany mangataka hamoronana tononkalo eo noho eo ireny tokoa. Fanamarihana kely rehefa manoratra ilay hoe "malaza" dia misy tsipi-panohizana (-) kely io azafady sao lazain'ny olona hoe te-halaza eo! Hihihi! Ma-Laza
Hahaha! Ianao an! Be vazivazy. Eny ry Ma-laza a! Hatraiza ka hatraiza ary izay ny dingana vitanao hatramin'izay e? Ary ahoana sy ahoana ny vinan'asanao?
Miezaka mifanerasera ary tsy mijanona mandalina sy mandinika, ho hita eo ihany atsy ho atsy e!
Hay! Ahoana ny fahitanao ny fivoaran'ny literatiora malagasy eto amintsika e?
Mivoatra tokoa a! Manaraka ny toetr'andro ara-bakiteny, izay ihany no azoko lazaina aloha.
Ary sokajin'olona ahoana sy ahoana no hitanao sy tsikaritrao mankafy ny literatiora? Ohatra hoe tanora sa antitra sa ny sarambabem-bahoaka?
Fahitako azy manokana aloha dia tanora e!
Marina izany, fa ny sarambabem-bahoaka dia saika efa mankafia ny poezia koa. Fa misy hafatra kely ve tianao hampitaina ny mpanoratra sy ny poeta maro eto Madagasikara?
Tsara ny mifanolo-tanana sy mifanakalo hevitra fa tontolo iray no iarahana.
Ary inona no hafatra ho an'ireo mpankafia ny literatiora malagasy?
Ny hafatra dia hoe fony fahavelony dia tiavo sy omeo lanja ny pôeta sy ny mpanoratra fa tsy hoe maty vao ramalala e!
Marina zany. Fa hamarana ny fotoana isika ka isaoranay etoana ianao nanaiky nivahiny teto aminay ary nanaiky nifampizara taminay ny kanto indrindra. Dia mankasitraka indrindra tompoko!
Ianareo no isaorana e! Telina indrindra nanome sehatra vaovao entina hisandratan'ny zazavao toa anay!